Ukubambisana kwezemfundo kuletha impumelelo ezweni
ABAFUNDI base-Curtis Nkondo School of Specialisation, eSoweto, bejabulela imiphumela emihle kamatric. Isithombe: ANA
LINDELANI MNGUNI | January 14, 2020
UNGQONGQOSHE weMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, umemezele imiphumela ka-matric ka-2019, lapho abafundi abangaphezulu kuka-80% beqede uGrade 12 ngempumelelo. I-Free State ihambe phambili njengoba abafundi abangu-88% bephumelele. Izibalo zikhombisa ukuthi abafundi abangaphezu kuka-330 000 bangakwazi ukubhalisela ukuthola iziqu ze-Bachelor noma i-Diploma, kanti abangu-78 000 bangabhalisa emakolishi amakhono, ama-TVET.
Imiphumela ka-matric iyakhombisa ukuthi ukutshala imali kwezobuchwepheshe njengengxenye yokufundisa nokufunda kuthela izithelo. Ukwenza isibonelo; kwisabelomali sika-2019, uMnyango weMfundo eyisiSekelo uhlele ukusebenzisa imali enguR40.5 billion kwingqalasizinda yezikole.
Lokhu kufaka phakathi ukuthengwa kwezinsiza-kusebenza ezisetshenziselwa ukufunda nokufundisa. Loku kwenza umsebenzi wothisha nabafundi ubelula. Ukusetshenziswa kwezinsiza-kusebenza ze-Information and Communications Technology (ICT) ezikoleni, okuyingxenye ye-4th Industrial Revolution, kusho ukuthi abafundi bethu kungenzeka bafike ezingeni elifanayo nelabafundi bakwamanye amazwe.
Imiphumela iphinde iveze ukuthi isizukulwane samanje sothisha, abaningi babo abaqeqeshwa emanyuvesi, siyakwazi ukufindisa ngendlela edingekayo.
Eminyakeni embalwa edlule kube nemibono ethi makuvulwe kabusha amakolishi ayeqeqesha othisha. Le mibono beyithi amanyuvesi awakwazi ukuqeqesha othisha abasezingeni eliphakeme. Kwezinye izifundazwe, othisha basebenza amahora amaningi, kufaka nezimpelasonto, ukusekela abafundi nokubalungiselela izivivinyo. UMnyango weMfundo eyisiSekelo kumele nawo unconywe ngezinhlelo eziningi zokuxhasa othisha nabafundi.
Inani labafundi abaphumelele liyakhombisa futhi ukuthi uhlelo lokufundisa i-CAPS, olwethulwe ngo-2011, nalo luthela izithelo.
Nakuba abafundi abaningi bephumelele, akumele siyishaye indiva eyokuthi basebaningi abafundi abangaphumelelanga, ikakhulukazi labo abavela ezikoleni ezintulayo. Luyadingeka ucwaningo olujulile oluzoveza ukuthi yiziphi izimo abafundi ababhekana nazo ezindaweni zabo, ezenza kube nzima ukuthi baphumelele?
Lolu cwaningo seluyoveza futhi ukuthi yini engenziwa ukuze kusizwe laba bafundi? Isibonelo; isifundazwe sase-Gauteng sigxile kakhulu ekwenzeni amakilasi esimanje ngokuhlinzeka izinsizakufunda ze-ICT.
Ngakolunye uhlangothi, i-Free State yona ibuyele emasisweni ngokwenza ngcono ezemidlalo neminye imisebenzi esekela ukufundisa yaphinda yahlinzeka ngezidingongqangi njengokudla kwabafundi.
Lokhu kuqinisekisa ukuthi abafundi baya esikoleni njalo futhi bayakuthokozela ukuba sesikolweni. Kuzo zombili lezi zifundazwe, imiphumela ka-matric ka-2019 ihambe phambili.
Lokhu kusho ukuthi azifani izisombululo okumele zisetshenziswe. Ngakho-ke, izikole, uhulumeni, amanyuvesi nezinye izikhungo zocwaningo zidinga ukusebenzisana, ukuze kutholakale izinto ezithinta abafundi bese zingenelela ngokufanele.
Kulabo bafundi abangaphumelelanga kubalulekile ukuthi bazi ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kungcono ukudela unyaka owodwa uphinde uGrade 12 kunokuba uhlale ekhaya ngaphandle kuka-matric bese ungasebenzi impilo yakho yonke.
Labo bafundi kumele bakhulume nothisha babo ngamasu okwenza ngcono imiphumela yabo ka-matric. Abafundi bangaphinde babheke amanye amathuba njengokubhalisa kumakolishi e-TVET ukuze bathole amakhono angathuthukisa amathuba abo okuqashwa.
Abafundi bangabuye babheke namathuba okuqala amabhizinisi abo basebenze njengama-artisans.
Kulabo bafundi abazoya emanyuvesi, kubalulekile ukuthi bazi ukuthi akudlalwa enyuvesi, kuyasetshezwa.
Uma bezwa ukuthi kunzima, kumele bacele usizo kothisha bakhona emanyuvesi neminye iminyango yakhona kubalwa ama-SRC, ababhekele ezemali zokufunda nababhekelene nezokuhlala kwabafundi. Ingane engakhali ifela embelekweni.
Kumele ukuthi sonke; kubalwa abafundi, abazali, othisha bezikole, amanyuvesi nohulumeni sibambisane ukuze izwe lethu liphumelele.
* USolwazi Lindelani Mnguni ungumqondisi weSikole seMfundo yoThisha e-Unisa